Bernd Leno Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiGerman Vanotamba Bernd Leno Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita "Penalty Killer". Our Bernd Leno Ubwana Nhau pamwe nes Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika zuva. Kuongororwa kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yake, mararamiro epakuvamba, mugwagwa mukurumbira, kusimuka mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hongu, munhu wose anoziva kuti ari pakati pevarindi vatsva vanopenya munyika. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezveBernd Leno's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Bernd Leno Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu Hwokutanga & Mhuri Yacho
Bernd Leno akaberekwa musi we 4 March 1992 kuvabereki vake; amai vake, Rosa Leno nababa, Viktor Leno mu Bietigheim-Bissingen, Germany. Mhuri yaBernd Leno ndeyekuGermany-Russian kubva kuna baba vake vari hafu yeGermany, hafu yeRussia.
Leno akakurira nemukoma wake muguta duku re Bietigheim-Bissingen kumaodzanyemba kweGermany iro rine pedyo neStttgart. Vaya vaiziva Leno semwana vakamuona semukomana ane simba. Simba rakadaro rakaendeswa mumitambo. Kutaura nezvemitambo, nhengo imwe neimwe yeBernd Leno yemhuri yakada bhora. Sezvo Leno akambozviisa;
"Bhora rakanga rakakosha zvikuru kumhuri yangu, nokuda kwehanzvadzi yangu uye kwandiri kwaiva upenyu hwedu. Tagara tichida kutamba bhora, kuti tive nebhora pedyo nesu. Kare kumashure, chido choga choga chaiva yebhola. "
Pakutanga panguva dzezororo, Leno aizoenderera mberi achitamba mitambo yemunharaunda kunyanya mu "masango akaipa" ayo asina kumubatsira nokuti akanga ane shamwari. Pazera re 6, akasarudza kutora bhora zvakanyanya nekunyora basa.
Bernd Leno Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts- Basa Rokutanga Upenyu
Leno akanyoresa mujeri reboka rake revechidiki SV Germania Bietigheim iro rakamupa mukana wekuisa nheyo yebasa rake. Akatanga kushungurudza semuridzi wepakati kubva panguva yaakazobatana neklabhu. Kutsunga kwaLeno kuve nyanzvi kwakanga kusiri kungofanirwa kunonoka. Kutsunga kwakadaro kwakamuita kuti aedze miedzo pazvidzidzo zvepamusoro.
Pazera remakore 11, Leno akashandiswa kujoina VfB Stuttgart vechikwata chevechidiki uye akasarudzwa kuti apinde mumiedzo. Akabatana neAIDS 200 vaduku vainge vasarudzwa kuti vasvike miedzo mubatch.
Nenguva isipi, Leno aiva pakati pevashandi ve6 vakasarudzwa naVfB Stuttgart mushure mekunge vanyatsogadzirisa vadzidzisi. Leno achiripo panguva ino akaenderera mberi semunhu ari pakati.
Bernd Leno Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Kuti akazova sei Gorota: Sezvo ari mudiki wechidiki, Leno akaita zvakawanda zvekudzoka kumashure kuti adzivirire mushure mutsva uye kunyange muchengeti wemagariro muzviitiko zvakawanda. Izvi akazviita kusvika paaiva nemakore 10 vasati pane chimwe chinhu chakaita kuti ave muchengeti wemagariro. Mune hurukuro ne Arsenal FC, Leno kamwe akambotaura. Mumashoko ake;
"Rimwe zuva muchengeti wemugovera wekambani yekumusha kwangu haana kuuya kumutambo mumwe chete, saka mudzidzisi akabvunza kuti ndiani aida kuva muchengeti wemagariro.
Ndakati kwavari, 'Ndinoda kuedza'. Ndakaedza uye munhu wose akaona kuti ndakanaka chaizvo. Zvadaro vabereki vangu vakanditengera magirafu uye ini handina kumbobvira ndisiya kubva kune chinangwa chemashure mushure meizvozvo. "
Chii chakaita kuti Leno awedzere kufarira chiito chekuchengetedza chaiva chifananidzo chake, hapana mumwe munhu kunze kwekare weAssenal vavariro, Jens Lehmann.
Kunyange zvazvo achiri muduku, Leno akatungamira kubva kuSpain uye aimbova chiratidzo cheMal Madrid Iker Casillas. Yaiva paTtuttgart Leno yakatanga kusangana naJens Lehmann uyo akawana zvidzidzo zvakawanda zvekuchengetedza. Kutaura nezvazvo, akambotaura Arsenal Press;
Ndakamucherechedza nguva dzakawanda dzekudzidzisa kwake uye ndakatora nguva dzekudzidzisa naye pandakanga ndava ne 16 kana 17 yemakore. Akanga akazvipira zvakanyanya, saka akachenjera. Ndiyo mafungiro aunoda semuchengetedzi wezvidzidzo.
Aimbova Arsenal vavariro, Lehmann akambomira paVfB Stuttgart apo Leno akapedza basa rake revechidiki nekambani. Leno akazviona semutungamiri waLehmann paanokurudzirwa kurutivi rwavo rwechikwata. Zvinosuruvarisa kune vatsva, Leno akasarudza kubvuma mafuro akazotevera pashure pemakore maviri nekambani iyo apo panguva iyoyo yakatamba muGermany chechitatu chikamu. Leno akazoita tiketi yeBundesliga naVa Bayer Leverkusen.
Bernd Leno Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
Kusimuka kubva muGermany muchikamu chechitatu kuchienda kugoverana kwekutanga kwaiva kwakaoma uye panguva imwe chete inofadza Bernd Leno uyo aingova 19 panguva iyoyo. Zvakanga zvakaoma nekuda kwekuti akaita mapikisi ake mutsara mberi neCentral mushure memavhiki matatu ekubatana nekambani. Panguva yemutambo, Leno akaratidza maitiro anoshamisa neAngel's best striker, Didier Drogba.
Muhurukuro, Leno akamboyeuka;
Mushure memutambo, Petr akati akafara uye akafara kwandiri. Akanga asingadi kuti ataure zvinhu izvozvo asi ndakazvikoshesa chaizvo. Izvo zvakanga zviri makore manomwe akapfuura uye ikozvino tiri pamwe chete kuArsenal - inopenga!
Mushure mechikwata cheChampions League, zvakave zvakajeka Bayer Leverkusen awana hero mutsva muchengeti wechirindi. Waizviziva Here? Iyo Champions League mutsara yakapa Leno mupepeti weEurope kune muduku kuduku akamboita muEFAFA Champions League. Aingova nemakore 19 uye mazuva 193.
Mushure mokubva kwaJens Lehmann kuenda, Leno akagara ari muboka rekutanga mushure mekuita tsvimbo yemitambo inoshamisa. Akaramba achigara naBayer Leverkusen kubva ku2011 kusvika ku2018 kuita 233 kuonekwa. Zvinhu zvakafamba zvakanaka makore ose iwayo kusvikira imwe chete BAD DAY !!
Kuoma Kuenda Kwake: Munhu wose aiziva Leno kuti ave neushingi hwakasimba - masaga ayo. Asi hapana munhu akaziva zvakaitika kwaari musi uyu wakaipa panguva yaOctober 2015 paakagadzira chinetso chakanyanya chakaipa cheBundesliga munguva iyi. Mumutambo weBundesliga Augsburg, Leno akazogadzirisa kuvhara mushure mokunge wakatarisa shure Jonathan Tah mumushure wemukati wake. Tarisa vhidhiyo pasi apa;
Kutaura nekutsamwa mushure mekurwiswa nemashoko emafani, Leno akati;
"SeGorova, iwe uri wega fighter. Iwe unodzidzisa zvakasiyana, iwe unodziya zvakasiyana. Iwe unorwisa nzvimbo imwechete uye ipapo kana iwe ukaita chikanganiso chimwe chete chakakura, iwe unokurumidzira idiot. "
Panguva ino, zvakajeka zuva rekupedzisira reLeno nekamukira rake rechiJerman rinodikanwa raizouya. Zvose zvaakaita ndezvokuti akamirire mukana wokubva. Nenzira yakanaka, pana 19th yaJune, 2018, chikwata cheChirungu zvombo akawana mabasa ake. Izvi zvakapa Leno mukana wekusangana neshamwari yake yekare Petr Čech.
Sezvo chinangwa chaive nacho, Leno akava muchengeti wemugovera uyo aizobudirira mumwe weArsenal muchengeti mukuru wepamba. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Bernd Leno Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Bernd Leno ave aine Sophie Christin kubvira muna August 15 2015, iyo inoitika zuva ravanopemberera zuva ravo rekuyeuka.
Sophie uyo anobva kuGermany neCzech akazvarwa musi we 17th waFebruary 1997 (5 Makore mishoma kudarika murume wake) muDusseldorf, Germany. Ndiye mudzidzi wekutengesa uyo anoshandisa imwe nguva kutarisa. Vose vanodikanwa vakaonekwa pane dzakawanda zvekare nzvimbo dzinonakidza zororo ravo.
Pasinei nekuve pamwe kwenguva yakareba, vose vanodiwa havana kutaurira zvirongwa zvemuchato wavo. Zvisinei, inongova nyaya yenguva isati yasati yambochato bhero dzechichato dzichinyengeterera.
Bernd Leno Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu hwehupenyu
Kuziva hupenyu hwehupenyu hwaBernd Leno kunze kwekuchengetedza zvingakubatsira kuwana mufananidzo wakazara pamusoro pake.
Kutanga, iye muRoma Katurike nerutendo. Leno akamboita basa rekushanyira St. Peter's Basilica, Vatican muRome kuti ave nezvose zvaakati "nguva inokosha" naPapa Francis.
A Real FIFA Gamer: Kunyange zvazvo vaArsenal vaifambidzana navo Hector Bellerin uye Rob Kubata vaizoita mitambo yekutamba; Kudanwa kwaDuty, Bernd Leno kufanana Juan Foyth angada kunamatira FIFA.
Kuremekedzwa kwaLeno kwaCasillas kwakaratidzwa mukusarudza kwake kweboka pane FIFA yemitambo yemitambo. Kutaura pamusoro pazvo, akamboti ...
"Ndaigara ndichitamba se Real Madrid pane PlayStation" akati. "Casillas yaiva chikonzero chikuru cheiyo".
Bernd Leno Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts- Untold Career Facts
Maitiro Aakava Nickname Yake- "Penalty Killer ": kunyange zvazvo Leno akadzidza zvakawanda kubva kuna Jens Lehmann uye Iker Casillas, asi aigona chaizvo kudzidzisa vashandi vaviri vavariro. Icho ndicho chiitiko che "kuponesa chirango" icho chakamupa zita rake raanoda.
Waizviziva Here? Yaimbova tiye Leverkusen gavhuna akambomira kuregererwa kwakamira mitambo mitatu kubva kune masere muBundesliga nzvimbo yakakoromoka kumashure mu2013 / 14. Akanyatsochengetedza mana mumutsara. Sezvakaitika panguva yekunyora, hapana muchengeti wemagariro aripo (zvose zvakashanda uye akasiya basa) akarova iyo nhoroondo yepasi.
Kutsungirira: Leno ane zvakawanda zvakatsungirira kutsinhana kusiyana nemukurumbira wezuva ranhasi. Akambochengetedza nzvimbo yacho yakachengeteka nevhu rakaputsika uye akanga asingatyi kutengesa kune vadzivisi vake nechishuvo chekutora bhora kwavari.
Izvi zvakaitika muElg League League yekupedzisira 16 game Diego Simeone's Atletico Madrid.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nokuverenga Bernd Leno Childhood Indaba yedu uye Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Petr Cech Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Laurent Koscielny Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Joel Campbell Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts